Barnaamijka jimicsiga TRX, ee loogu talagalay xoojinta jirka | Ragga Stylish
Jir ahaan u shaqeynta jirka ayaa lagama maarmaan u ah inay firfircoonaan iyo caafimaad ahaato. Laakiin nasiib daro xawaaraha nolosha ee maanta ayaa adkeynaya in jimicsi la aado; Waqti la'aan ama lacag la'aan awgeed, qaar badan ayaa iska daa tababarka. Dhammaan qodobbadan ayaa suurtagal ah in lagu beddelo laylisyada TRX.
Es hawl jaban waxaana lagu sameyn karaa guriga ama meesha aad go'aansato maxaa yeelay waa la qaadi karaa; Intaa waxaa dheer, waxay wax ku ool tahay dhowr daqiiqo oo jimicsi maalinle ah.
Nidaamkan waxay ku saleysan tahay shaqo la joojiyey; Horumarinta murqaha waxaa lagu gaaraa adkaysiga, isu dheelitirka, iyo xoogga. Waxaa jira howlo kala duwan oo la raaci karo iyadoo loo eegayo xaaladdii qof walba soo maray; Kuwani maahan waxqabadyo saameyn sare leh, sidaa darteed leylisyada 'TRX' qof walba wuu ku dhaqmi karaa.
Iyada oo la isku xidho laba qaybood oo jirka ka mid ah ayaa lagu laalay. Dhanka kale, waxay ku saleysan tahay dhulka oo dabacsanaan, dabacsanaan, xoog iyo iska caabin ayaa lagu kasbadaa; waa muhiim inaad ilaaliso feejignaanta iyo neefsashada nasashada si waafaqsan natiijooyinka ugu wanaagsan.
1 Faa'iidooyinka jimicsiga TRX
2 Qaar ka mid ah jimicsiyada 'TRX' si ay u bilaabaan inay baruurta u beddelaan murqo
2.2 Kala riixid
2.4 Kabaha curyaaminta
2.5 Fuula Buurta
2.6 Lug la hakiyay
3 Waxqabad caafimaad leh
Faa'iidooyinka jimicsiga TRX
Laptop. Waa wax aad u macquul ah inaad safar ku gasho ama xafiiska; daqiiqadaha nasashada waxaad ugu deeqi kartaa 20 daqiiqo jadwalka caadiga ah. Xitaa fasaxa yaan laga waayin boorsadaada; ku celcelinta jimicsiga TRX subax kasta waxay bixisaa tamar inta ka hartay maalinta waxayna kordhisaa isku kalsoonaanta.
Dhaqaale. Waxay leedahay qiimo jaban loomana baahna wixii bil kasta khidmad ah. Intaas waxaa sii dheer, waqtiga yar ee isticmaalka maalinlaha ah ee ay qaadato, waa la wadaagi karaa; oo kala ah, Waxay u oggolaanaysaa keydinta lacagta jimicsiga ee dhammaan xubnaha guriga.
Waxay xoojisaa nidaamka wadnaha. Waxay wanaajisaa adkeysiga iyo xoogga wadnaha.
Ma keeno dhaawacyo wadajirka ah. Jimicsiyada TRX waa saameyn hoose sidaa darteed jirka ayaa loo ilaaliyaa taxaddar.
Waa shaqeyneysaa. Jirka iyo maskaxdu waa kuwo firfircoon.
Cufnaanta qofba qof. Waxay kuxirantahay jagada qofka, xoogga la isticmaalay ayaa loo maareeyaa si aan si xad dhaaf ah loo dalbado.
Kordhi hawlgelinta. Sababtoo ah waa nidaam tababar shaqsiyeed, qofku waa inuu mas'uul noqdaa. In kasta oo aysan ahayn inaad la kulanto jadwalada ama aad ku qiimeyso qof ka sarreeya, ballanqaadka inaad u hoggaansanaato jadwalka waa lagama maarmaan; kaliya sidan ayaa lagu gaari karaa natiijooyin wanaagsan.
Muruqyo xanuun qaarkood ayaa laga yaabaa inay soo baxaan inta lagu jiro maalmaha ugu horreeya ee tababarka.. Iskusoo wada duuboo, aagga gacanta; Laakiin ugu dhakhsaha badan raaxo-darradu way tagtaa, maxaa yeelay jidhku wuxuu u baahan yahay inuu la qabsado.
Qaar ka mid ah jimicsiyada 'TRX' si ay u bilaabaan inay baruurta u beddelaan murqo
Maaha in laga waayo nidaamka caadiga ah. Ujeeddadeeda ugu weyni waa in laga helo xoog iyo muruqyo laabta; dhabarku wuxuu gaaraa faa'iidooyin badan oo xitaa wuxuu hagaajiyaa qaabka.
Waxaad u baahan tahay inaad istaagto adigoo wajahaya xargaha; wuxuu ku qaadaa gacmihiisa mid walba gooni gooni; iyadoo cagaha si adag dhulka ujiifayo jirka oo gadaal gadaal u kalabixinaya. Had iyo jeer hayso khad toosan, gacmahaaga jilci ilaa ay gacmuhu ku dhacaan laabta. Habkaas, biceps iyo trapezius sidoo kale waa la xoojiyay.
Sidoo kale waa jimicsi bilowga ah iyo wuxuu ku saleysan yahay aagga sare. Muruqyada la dhaqaajinayo waa gogo ', garbaha, xasiliya caloosha iyo dhabarka.
Adoo dhabarkaaga u taagan xargaha, gacan ayaa lagu qabanayaa gacan kasta; Iyada oo kubbadaha cagaha si adag dhulka ugu jiraan, jirka ayaa si toos ah horay loogu tuurayaa. Kala bixi gacmahaaga si aad mar kale u kacdid; si aysan ugu adkaan in la ilaaliyo dheelitirka, waa inaad caloosha adkeeysaa oo aadan cagahaaga dhaqaajin.
Nooc riixitaan ah ayaa ah in la hakiyo dhinacyada hoose ee suunka. Gacmahaaga saar sagxadda oo bilow riixitaanka.
Lugaha iyo badhida ayaa ah xiddigaha layligan TRX. Noocyo shaqsi ayaa loo sameeyaa labada lugood; waxay ku habboon tahay heerka heerka iyo murqaha mid kasta oo ka mid ah addimada hoose.
Mid ka mid ah lugta ayaa la laalayaa tan kalena horay ayaa loo dhigayaa halka ay xoogga ku urursan tahay. Dhabarkaaga kor u toosi, gacmahaagana dhexda ku xidho dheelitirkaaga ilaasho
Jimicsi lagu shaqeynayo bowdadaada, murqahaaga iyo miskaha. Guud ahaan lama sameeyo inta badan, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad u sameyso si aad uhesho muruqyada murqaha oo wanaagsan. Waxay u baahan tahay feejignaan si loo sameeyo si sax ah.
Cidhibtooda waxaa la dhigaa astaamaha suumanka oo jidhka ayaa looga tagaa iyadoo fidsan oo sagxadda ah. Waa inaad ka tagtaa gacmahaaga oo dhulka ku seexanaya dhinacaaga; gluteus ayaa weli ku jira ganaax cidhibtiina waxaa loo jiiday xagga dabada. Kadibna waxay ku noqonaysaa booska bilowga.
Si aad u lumiso miisaan una adkeyso caloosha ayaa ah jimicsiga ugu habboon. Markasta oo cunto la fulinayo, waa inuu lasocdaa jimicsi jimicsi dhisa murqaha; habkan, jilicsanaanta ka soo bixi karta markaad miisaankaaga hoos u dhigto waa laga fogaadaa. Fuula Buurta waxay caawisaa gubida kalooriyada iyadoo la xoojinayo aagga caloosha.
Waa la laalayaa iyadoo cagaha ay ku dhejinayaan xargaha suunka.
Waxaad u fidineysaa jirkaaga horey oo waxaad isku taageertaa gacmahaaga dhulka. Mid ka mid ah lugta ayaa la hagaajiyaa mid kalena waxaa la keenayaa laabta, waxaa lagu soo celiyaa meeshiisii ​​hore.
Ugu dambeyntiina, lugta kale ayaa la keenaa, iyadoo lagu celinayo qalliinka. Waa jimicsi la mid ah raacida baaskiil.
Lug la hakiyay
Waa jimicsi dhiirrigeliya awoodda wax lagu xakameeyo iyo xasilloonida. Muruqyada iyo murgacashada ayaa lagu xoojiyay waqti gaaban.
Madaxaaga iyo garbahaaga ku seex sagxadda, gacmaha si toos ah dhinacyadaaga.
Sare u qaad dhabarkaaga, miskahaaga iyo lugahaaga.
Adoo cagahaaga ku dhejinaya goynta 'TRX'.
Laab jilbahaaga adigoo cirbahaaga u soo dhoweynaya dabadaada, ka dibna kala bixi.
Jirka intiisa kale waa in lagu hayaa meel isku mid ah inta lagu jiro howlaha caadiga ah.
Cufnaanta ayaa lagu kala duwanaan karaa masaafada taas ayaa la helay markii xariijimo ama markii gacmaha la taagayo.
Waxqabad caafimaad leh
Jimicsiyada TRX waxay bixiyaan suurtagalnimada ku dhex dar cunsurro kala duwan howlaha jir ahaaneed; taasi waa sababta kuwa ku dhaqma ay u sameyn karaan kala duwanaansho si ay uga fogaadaan caajiska. Tababarayaasha kooxaha waaweyni waxay yiraahdaan waa wax aad u xiiso badan in nidaamkan lagu daro dhaqanka isboortiga.
Marka laga gudbo waxtarrada, waxay noqoneysaa a kale oo sababa farxad, wehel iyo madadaalo. Labada labo waxaad ku ciyaari kartaa doorka macalin iyo arday, xitaa waxaad sameyn kartaa tartamo taxane ah oo midba midka kale ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Layli TRX